TAMAANDHO BATANYAN: SHARAXAAD IYO DABEECADAHA KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Tamaandho Batanyan: sharaxaad iyo dabeecadaha kala duwan
Tixgeli aabaha yaanyada, sifooyinka iyo sharaxaadda kala duwanaanta. Waa fasal hore u bislaaday, dherer ahaan iyo fajacsanaan wanaagsan. Kallocada yaryar waxay koraan illaa laba mitir, oo ay ka buuxaan caleemaha dhinaca adag. Miraha waa weyn, wadnaha-qaabeeya, dhalaalaya, casaan. Maqaarka midhaha ayaa ah mid cufan, jidhku waa sonkor, jilicsan. Miro ayaa culeyskiisu culus yahay ilaa 300 g. Kala duwanaanshuhu waa mid aan qabyo ahayn waxaana si dhif ah uu u saameeyaa cudurka. Waa ku filan in la beero dhowr duurka si ay u soo ururiyaan dalagga aad u cajiib ah. Maqnaanshaha, iyo sidoo kale horumarinta, dhakhso u dhacdaa, haddii dhirta helo daryeel habboon. Saddex bilood kadib markaad beerto, waxaad soo ururin kartaa miraha ugu horreeya.
Doorashada goobta loogu talagalay yaanyada sii kordhaya
In kasta oo ay iska caabbiyaan cimilada qaboobaha, laguma talin karo in la beero yaanyada yaryar ee meelaha dabaylaha ah ama hooska dhaadheer.
Iftiiminta noocyo yaanyo ah Batyana
Geeddi ayaa dareensan in meelaha ugu sareeya ay u furan yihiin qorraxda. Thanks to diirimaadka qorraxda, miraha waxaa lagu shubay casiirka, iyo jidhka noqonayaa jilicsan oo sonkor leh.
Shuruudaha dabiiciga ah ee goosashada qani ku ah
Carrabku waa inuu noqdaa mid nafaqo leh, iftiin ah oo la miiray. Xayawaanka ciidadu waa helitaanka hawada, dheecaanku wuxuu ka hortagi doonaa istaabashada qoyaanka, wuxuu ka badbaadin doonaa bakteeriyada horumarinta jawiga qoyan.
Waa muhiim! Xumad culus ma ogolaanayso nidaamka asaasiga ah ee tamaandhadu inay si fiican u koraan.
Sida loo abuuro geedo dabayl ah
Yaanyada dadku waxay leeyihiin dabeecado wanaagsan beeralayda, laakiin si ay u helaan natiijooyin beerashada wanaagsan, beerashada maaddada iyo ciidda waa in la diyaariyaa.
Caarilka for geedo waa ka wanaagsan inaad karsato naftaada. Si arrintan loo sameeyo, qaado peat, carrada caleen, ciid iyo humus in si isku mid ah loo siman yahay. Marka isku qasan, ku dar 30 g of superphosphate iyo potassium sulfate. Ciidda waxaa lagu nadiifin karaa iyadoo la adeegsanayo hab fudud oo fudud: diyaariso isku dar ah ciidda hal bil ka hor beerashada oo ka tago qabowga. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la diiriyo ka hor inta aan la beeri.
Abuurka jilitaanka yaanyada ka hor intaadan sii korin waa in lagu hubiyo biqilka, si aan loo beerin mujurucyada. Ku daadi biyo diirran, kuwa hoos ku dhaadhaca waa ku habboon yihiin, kuwa caleenta ah ma sii deyn doonaan korka. Abuurka ku habboon waxay u baahan yihiin in la kariyo xalka xalalka potassium.
Ka dib qaabsocodka jeermi-dilista, ku dhex geli abuurka kiciyaha "Fitosporin". Beeridda waa ka fiican tahay isticmaalka sanduuqa. Qoto dheer oo ah hal mitir oo dherbaaxa miraha, ku dabool daboolka iyo ku rid kuleylka. Batyana waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee biqilka abuurka yaanyo, oo ku xiran xeerarka beeridda. Sprouts waxay u muuqaneysaa laba toddobaad iyo badh ka dib. Sida ugu dhakhsaha badan ee laba ama saddex caleemo muuqdaan, geedo ku wareegaya lagu koriyo.
Ma taqaanaa? Tamaacada ayaa muddo dheer ku riyootay warkii aan u baahneyn ee uurjiifka sunta ah. Colonel Johnson, oo tixgelinaysa caddaalad darro, horteeda maxkamada New Jersey waxay cuneen baaldi tamaandho ah si loogu qanciyo dadka ka soo horjeeda. Marka laba saacadood ka dib gumeysigu wali nool yahay oo caafimaad ahaan aad u wanaagsan, dadkuna waxay u badaleen xanaaqooda.
Tomato Batyana si fiican u koraa leh daryeel wanaagsan ee geedo. In caleemaha aqalka dhirta lagu koriyo waxay u baahan tahay waraabinta joogto ah, hawo cusub, si taxadar leh u dabacsan. Marka qaadashada, waa suurad wacan in ay isla markiiba soo saaro sprouts daciif ah: ma noqon doonaa isticmaalka.
Geedo caleenta ah ee dhulka ku furan
Geedo waaweyn oo la beeray waxaa la beeray laba bilood ka dib beeridda. Good, ku habboon geedo beerto wuxuu leeyahay mid adag, oo leh qaro weyn, caleemo casri ah. Tomato Batyana adkaysi u qabow, sida lagu sheegay sharaxaadda kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta laga beerto dhul furan, geedo waa in la adkeeyo. Sidaa darteed, albaabada aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la furay dhowr saacadood, si tartiib tartiib ah u kordhinaysa waqtiga adag. Maadaama ay kala duwan yihiin dhererka, siinaya caleemaha lateral, waa in la beeray iyada oo la tixgelinayo in ay koraan. Masaafada u dhaxaysa saf waa 130 cm, inta u dhaxaysa geedo - ilaa mitir. Geedo marka la beero waxaa lagu aasay carrada si caleemaha cotyledonary.
Noocyada daryeelka ee noocyo yaanyo Batyana, beerista agrotechnology
Marka laga beerto Tomato Batyana, laga yaabee waxa ugu muhiimsan ee tiknoolojiyada beeraha waa doorashada saxda ah ee kuwii hore. Fikradda kiiskan waxay noqon doontaa kaabajka, qajaarka, basasha, karootada, digirta ama caleemaha dilka ah. Laguma talinayo in la beero yaanyada meel u dhow baradhada.
Digniin! Ma dhali kartid dabacsanaan ka dib: cadadka isku midka ah ee yaanyada leh dalagyadaas.
Tamaandhada waxay u baahan tahay waraabin dhexdhexaad ah. Biyaha waxaa la doorbidi karaa diirimaad, biyo qabow. Geedaha ka dib markii waraabinta ay u baahan yihiin si loo daboolo iyo udhaqaaqo. Dareemidda haramaha ayaa sidoo kale muhiim ah.
Dharka ugu sareeya ee yaanyada
Wixii waxsoosaar sarreysa, arrinta kudheerta leh ee isku dhafan macdanta macdanta waa suurad wacan. Faleebo mullein ah ayaa ku habboon (shan litir) oo lagu daro nitrophoska (15 g halkii baaldi biyo ah). Isku darkaan waxaa la bacrimiyey ka yar baadiyaha. Dharka labaad wuxuu ku qaataa walxo macdan oo dareere ah marka uu geedka blooms.
Batyana kala duwan waa yaanyo u adkaysta, gaar ahaan phytophthora, breeders bixiyaan sida sharaxaad. Xaqiiqdii, tamaandhada ayaa hore u bislaaday isla markaana aan haysan waqti ay ku qaadato phytosporosis, maaddaama ugu sarraysa horumarinta bakteeriyadu ku dhacdo kuleyl iyo kuleylka jiilaalka iyo bishi July. Inkasta oo bannaanka u badan oo ka hadlaya Batyana sida darajo aan dhib lahayn.
On geedo waxay noqon kartaa rabshad qaab ah ee dhibco huruud ah. Sababta waa la'aanta nitrogen, zinc, birta ama potassium. Ka feker nooca bacriminta ee aad ka maqan tahay, buuxi farqiga. Dheeraadka dheeraadka ah ee dhajinta ayaa la qabsan doona dhibaatada lafteeda. Si looga hortago cayayaanka laga yaabo yaanyada, isticmaalaan hababka dhaqameed: faleebo marigolds ama løgnels, ash, faleebo oo toon ah.
Goosashada ugu horraysa waa suurtogal saddex bilood ka dib marka la beerto. Waxaad soo ururin kartaa miraha caanaha ah ee saladhka iyo ka saarida kuwa deformed isla waqti isku mid ah: ma si buuxda u kobcin, cunto qaadashada yaanyada caafimaad leh. Isku day inaadan seegin wakhtiga aruurinta, sida yaanyada boodhka ah u burburin doonaa oo aan la keydin. Kala duwan yaanyada Batyana waxay leedahay wax-soosaarkooda sare: laga bilaabo hal mitir oo laba jibbaaran waxaad ka qaadan kartaa ilaa 17 kg oo yaanyo ah. Yaanyada la goostay si fiican ayaa loo qaadaa.
Xiiso leh Dalalka qaarkood, yaanyo la barbar dhigo tufaax. Talyaaniga ayaa ugu yeeraan midhaha tufaaxa dahabka ah, Faransiiska ah tufaaxa jacaylka, iyo Jarmalka tufaaxa jannada.
Tomato Batyana: Fikradaha iyo qasaarooyinka kala duwan
Sidaas, yaanyo Batyana - in ay koraan noocyo this. Ka baaraandegidda dib u eegista, noocyada kala duwan waxay ka faa'iideystaan ​​faa'iidooyinka badan. Waxay u adkaysaa cagaarka, waxay u koreysaa oo u horumarisaa si deg deg ah, waxay leedahay wax soo saarka sare, waxaa si aan toos ahayn u soo gaadhsiin cayayaanka iyo cudurada. Tamaandhada kala duwan ee noocan ah ma caajiso inta lagu jiro gaadiidka, leeyihiin miraha waaweyn, sifooyinka wanaagsan ee dhadhanka. Miraha fasalka waa mid guud ahaan loo isticmaalo: saladh, suugo, suxuunta kulul, salting iyo ilaalinta, xitaa macaanka.
Ogolaansho: Heer sare, wuxuu u baahan yahay taageero joogta ah. Tan iyo dhirta si dhakhso ah u koreysa, taageerada waa in la bedelaa waqti ka waqti iyo caleemaha dhinaca. Kala duwanaanta aan loo beerin karin si adag: Kalasoocida waxay kordhin doontaa khatarta cudurka iyo faafidda dulinka.
Tamaandho waa miro kulul, waxay jecel yihiin dadka waaweyn iyo carruurta. Qaar badan oo sheekooyin culus ah ma sameyn karaan iyada oo aan lagu darin yaanyo ama suugo iyaga ka mid ah, suxuuno badani waa qaybta ugu muhiimsan. Intaa waxaa dheer, tamaandhada waxaa ku jira content calorie hooseeyo.